ENTERTAINMENT Archives - VPS - MCKZONE
နားထောင်သူတွေကို ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဆားဘီးယားအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းသီဆိုမှု
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊လူမျိုးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခု၊အထွဋ်အမြတ်ထားရာတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုတော့ လူတိုင်းလူတိုင်းငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကလေးဘဝကတည်းက ထိတွေ့ခဲ့ဖူးကြမှာပါ။ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကလေးဘဝမှာ အတန်းပညာစတင်လေ့လာဖို့ ကျောင်းစတက်ပြီဆိုကတည်းက မိမိရဲ့အမိမြေကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်လာအောင် နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ပထမဦးစွာ သင်ကြားခဲ့ရပြီး နေ့တိုင်းမပျက်မကွက်သီဆိုခဲ့ကြရမှာပါ။ အမိမြေကိုချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်း နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ကြပြီး နိုင်ငံတော်သီချင်းသံကြားတဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို မတ်တပ်ရပ်သတိစွဲကြတဲ့အထိ တန်ဖိုးထားတတ်ကြတာပါ။အတန်းပညာနဲ့ ကင်းလွတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ နိုင်ငံတော်သီချင်းနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်ဟာဆိုရင် နိုင်ငံအဆင့်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာသာ တွေ့မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်မစတင်ခင် အလေးပြုတဲ့အချိန်မျိုးလောက်မှာသာ ထိတွေ့ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်သီချင်းသီဆိုရာကို နားထောင်ခံစားရာမှာလည်း နေရာဒေသနဲ့အချိန်နေ၊အခြေအနေအချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ခံစားချက်တွေ ကွဲပြားတတ်ပါတယ်။လူငယ်တချို့က ရုပ်ရှင်မစတင်ခင် လွှင့်ပေးတဲ့နိုင်ငံတော်သီချင်းကို သာမန်ကာလျှံကာသာ သတိစွဲအလေးပြုကြသူများပေမယ့် အားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူများနိုင်ငံတွေနဲ့အပြိုင်သီဆိုခဲ့တဲ့ အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဇာတိသွေး၊ဇာတိမာန် ပိုမိုတက်ကြွစွာနဲ့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲခံစားပြီး သီဆိုတတ်ကြမှာပါ။ လတ်တလောလူမှုကွန်ရက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆားဘီးယားအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းသီဆိုမှုဟာဆိုရင်လည်း နားထောင်သူတွေကို ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထစေတယ်လို့ နာမည်ကြီးကာ မျှဝေသူတွေများပြားနေခဲ့တာပါ။ဒီဗွီဒီယိုလေးကိုတော့ ဆားဘီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ဧည့်ခံပွဲမှာ ဆားဘီးယားအမျိုးသမီးတွေရဲ့သီဆိုမှုကို […]
Posted in: ENTERTAINMENTMC KZONE	 February 5, 2020
မြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ကျချိန်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ လက်ရှိကာလမှာ မြန်မာဇာတ်ကား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ပေါကားတွေ ဖြစ်နေတာလည်းပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပရိသတ်တွေဟာ ဘဝကို အပျင်းပြေဖို့အတွက် ပေါကားတွေကိုသာ အကောင်းစားအမှတ်နဲ့ ကြည့်ရှုနေရတာလည်း အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ လူငယ်ဒါရိုက်တာတွေ ပေါ်လာပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အတွေးအမြင် နည်းပညာတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး အကောင်းစား ရိုက်ချက်တွေကြောင့် အချိန်တို အတွင်းမှာပဲ ပရိသတ်ရင်ထဲကို ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို ကုန်ကျစားရိတ်များတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို အကောင်းဆုံး ကင်မရာတွေရဲ့ ရိုက်ချက်တွေနဲ့ ဖန်တီးခဲ့ကြတာပါ။ အထူးသဖြင့် နည်းပညာ ၊ စက်ပစ္စည်းတွေ မစုံတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်မှာ အတွေးအခေါ်ရှိနေပေမယ့် ဘာမှ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အတွေးအခေါ်ရှိနေပြီးတော့ ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ပဲ Short Film ကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ လူငယ်တွေလည်း […]
Posted in: ENTERTAINMENTMC KZONE	 January 14, 2020
အိမ်ဘေးနားက အိမ်ကနေ “ငါ့ကိုလွှတ်ပေးပါ” ဆိုပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဆက်တိုက်အော်နေတဲ့ အသံကြားလို့ အိမ်နီးနားချင်းက စိုးရိမ်ပြီး ရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်လိုက်တော့ ရဲသားလေးယောက် ရောက်လာပြီး အဲဒီ့အိမ်ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းတာပေါ့။ အိမ်ရှေ့မှာ အိမ်ရှင်က ကားပြင်နေပါတယ်။ ရဲတွေမေးတာကြားတော့ အိမ်ရှင်က ရယ်တာပေါ့။ “ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးရဲ့ကားဘရိတ်ကို လဲပေးနေတာပါ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ အသက် ၄၀ အရွယ် ရမ်ဘိုလို့ ခေါ်တဲ့ ကြက်တူရွေးတစ်ကောင် ရှိပါတယ်။ သူက ငှက်နားတန်းပေါ်မှာနားရင်း အမြဲတမ်း သီချင်းဆိုတာ၊ စကားပြောတာမျိုး လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ ရဲသား(၄)ယောက် ကျွန်တော့်အိမ်ရောက်လာတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အကူအညီတောင်းနေတဲ့အသံမျိုးကြားတယ်ဆိုပြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖုန်းဆက်လာလို့ လာစစ်ဆေးကြောင်း ပြောပါတယ်။” “ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ကြက်တူရွေးလေး ရမ်ဘိုနဲ့ရဲတွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရော၊ ကျွန်တော်ရော ရယ်လိုက်ရတာ။ နောက်တော့ […]
Posted in: ENTERTAINMENTMC KZONE	 January 10, 2020
အနုပညာသမားတွေအမြဲပြောနေကျစကားတစ်ခွန်းရှိတယ်လေ။ ပရိတ်သတ်ကထမင်းရှင်ပါ၊ အားပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကို အမြဲကျေးဇူးတင်နေပါတယ်ဆိုပြီး။ ဒီလိုပြောတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဆိုရင် ပရိတ်သတ်တွေကလည်း အချစ်တွေပိုကြတာ ထုံးစံပါပဲ။ ဒီလိုမျိုး ပရိတ်သတ်ရဲ့ ကျေးဇူးကိုမမေ့ဘဲ တန်ဖိုးထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူမကတော့ တခြားမဟုတ်ဘဲ Porn Star တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jessa Rhodes ပါ။ Lad Bible မှာ ဖော်ပြချက်အရ သူမဟာ ပရိတ်သတ်ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရဖို့ဆိုရင် အတူတူအိပ်ခိုင်းရင်တောင် အိပ်ပေးမှာပါတဲ့လေ။ ဒီစကားကိုတော့ သူမရဲ့ Twitter account ဖြစ်တဲ့ @missjessarhodes မှာ live chat ရင်းပြောသွားခဲ့တာပါ။ အဲဒီမှာ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ကနေပြီး “ပရိတ်သတ်အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ၊ fan တွေရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုရင် သူတို့နဲ့အတူ အိပ်ဆိုရင် အိပ်မှာလား” ဆိုပြီး မေးလာခဲ့တာပါ။ ဒါကို […]
Posted in: ENTERTAINMENTMC KZONE	 October 18, 2019
သူမ၏ ပန်းချီပညာကို အရမ်းလေးစားတယ်ဒိထက်မက အောင်မြင်ကျော်ကြားပါစေ သမီးရေ သူမ၏ ပန်းချီပညာကို အရမ်းလေးစားတယ်ဒိထက်မက အောင်မြင်ကျော်ကြားပါစေ သမီးရေ သူမ၏ ပန်းချီပညာကို အရမ်းလေးစားတယ်ဒိထက်မက အောင်မြင်ကျော်ကြားပါစေ သမီးရေ CRD-Lso Maung Maung Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် သူမ၏ ပနျးခြီပညာကို အရမျးလေးစားတယျဒိထကျမက အောငျမွငျကြျောကွားပါစေ သမီးရေ
Posted in: ENTERTAINMENTMC KZONE	 October 15, 2019
13.10.2019 ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား အောင်လအန်ဆိုင်း နဲ့ ဗီရာတို့ပွဲဟာ ဆိုရင်တော့ တစ်မ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အောင်လရဲ့ ထိုးကွက် တိုက်ကွက်တွေကြားထဲမှာ ဗီရာတစ်ရောက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ အောင်လ နိုင်ခဲ့ပါတယ်.ဗီရာ ဟာ အောင်လ ကို ဘယ်နေရာမှာမှ အနိုင်မရခဲ့ပါဘူး.(စိတ်ဓတ် သက်လုံ ဗျူဟာ ထောင်ချောက်)ပြီးတော့ ပတ်တံတောင်ကြောင့် ပွဲသိမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ထင်မထားတဲ့ ညာဝိုက်လက်သီးနဲ့ ပွဲသိမ်းခဲ့တာပါ။ သာမန်ပြိုင်ဘက်ဆို ညာခြေကန်ချက်နဲ့တင် နှာနှပ်ယူရမှာပါ။ ဗီရာဟာ ဖိလစ်ပိုင် အမေရိကန်ကပြားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝှေ့သမားတော်တော်များများ ထွက်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ပရိတ်သတ်ကြီး အပျင်းပြေ ဖိလစ်ပိုင်က LGBT တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ sinonloresca ရဲ့ လက်ဝှေ့လေ့ကျင့်နေပုံလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ sinonloresca ဟာဆိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အချိန်တော်ကြာအောင် […]
Posted in: ENTERTAINMENTMC KZONE	 October 14, 2019
ကိုယ်နဲ့ တစ်ညစာပျော်ဖို့ ခေါ်လာတဲ့ အပျော်မယ်လေးကို သူတောင်းစားကိုပေးပြီး ပျေားတခုထဲကနေ အရက်တွေ အရမ်းကိုမူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အရက်တစ်လုံး နဲ့ ညည့်ဌက်ကလေးတစ်ယောက် ဆွဲပြီး ထွက်လာသတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ ဘားအရှေ့မှာ တောင်းရမ်း စားသောက်နေတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်က ဗိုက်အရမ်းဆာနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ကို အစားစားဖို့ ငွေစကြေးစ အနည်းငယ်လောက် စွန့်ကြဲဖို့ အမူးသမားကို တောင်းရမ်းပါတော့သတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ အမူးသမားကလည်း ငါ့မှာ ပိုက်ဆံတော့ မကျန်တော့ဘူး မင်း သောက်ချင်ရင်တော့ ရော့..ငါ့ အရက် သာ သောက်လိုက်တော့လို့ အရက်ပုလင်း လှမ်းပေးရော အဲ့ဒီမယ် သူတောင်းစားက (ကျွန်တော် အရက် မသောက်တတ်ပါဘူးခင်ဗျ ..ထမင်းစားဖို့ ငွေသာလိုတာပါ) လို့ ပြန်ပြောသတဲ့….. ဟာ….အဲ့ဒါဆိုလည်း ရော့ကွာ..ငါ့ ဆေးလိပ်ဗူး..တော်တော့..ပိုက်ဆံတော့ မရှိတော့ဘူးဆိုပြီး ဆေးလိပ်ဗူး […]
Live လွှင့်နေတုန်း အနောက်ကနေ အရက်မူးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ မဖွယ်မရာပြုမှုနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး
အမျိုးသမီးအတော်များများဟာ သူမတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ မျှဝေရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ Li လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ Twitch ဆိုတဲ့ Live stream platform ကနေ Live လွှင့်နေရင်း အမူးသမားတစ်ယောက်က အနေကနေရောက်လာပြီး နှောက်ယှက်ခဲ့တာကြောင့် ထိတ်လန့်စရာနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က Li ဟာသူမရဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်တွေကို ပြုလုပ်ပြီး အားလပ်နေတာကြောင့် သူမရဲ့တစ်နေ့တာကြုံခဲ့ရတာတွေကို Live လွှင့်ရင်း သူမရဲ့ဖန်တွေကို ပြောပြနေပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာပဲအရက်မူးနေတဲ့ အနောက်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့နောက်ကိုရုတ်တရက်ရောက်လာပြီး သူမရဲ့ပုခုံးကိုဆွဲပြီးနောက် Live လွှင့်နေတဲ့ ဖုန်းကင်မရာကနေ သူမရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေကို ပေါက်ကရစကားတွေ လာပြောခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအမူးသမားဟာ Oh Jesus Love you ဆိုတဲ့သီချင်းကို သူမရဲ့ပုခုံးကိုဖက်ရင်းနဲ့ ဆိုနေခဲ့တာပါ။ ပြန်ခါနီးမှာတောင်မှ […]
Posted in: ENTERTAINMENTMC KZONE	 October 12, 2019
ပရျောဖကျရှငျနယျကကြ ဓာတျပုံကောငျး တဈပုံရဖို့ဆိုတာ အရမျးကို ခကျခဲသလို အရမျးလညျး အနုစိတျရပါတယျ။ တကယျ့အပွငျက ပတျဝနျကငျြအနအေထားနဲ့ လူပုံတှဟော စိတျဝငျစားဖို့မကောငျးနပေမေဲ့ ဓာတျပုံထဲရောကျသှားရငျတော့ လူတှကေ စိတျဝငျစားကတြာမြားပါတယျ။ ယခုလညျး အမရေိကနျက ဓာတျပုံဆရာ Geo Leon ဆိုသူဟာ သူ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဓာတျပုံတှရေဲ့ နောကျကှယျက ဘယျလိုဖနျတီးယူရလဲဆိုတာကို ထုတျပွခဲ့ပါတယျ။သူ့ရိုကျကူးထားတဲ့ ဓာတျပုံတှရေဲ့ နောကျကှယျက ဘယျလောကျစိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးသလဲဆိုတာတော့ အောကျက ပုံတှကေို ကွညျ့လိုကျရငျ သိနိုငျတယျနျော။ ၁။ ဒီလို စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ ပုံတဈပုံရဖို့ မွပေုံကားခကျြကွီးကို မီးရှို့ပဈလိုကျတာနျော။ ၂။ အိပျယာထဲမှာလို့ မထငျနဲ့နျော။ အမှနျတော့ အပွငျက ဆိုငျတဈဆိုငျမှာ။ ၃။ Princess Kitana ဇာတျကောငျလို ဓာတျပုံရဖို့ ဘယျလို့ရိုကျရသလဲဆိုတာ။ ၄။ စူးရှတဲ့ အကွညျ့တှေ […]
Posted in: ENTERTAINMENTMC KZONE	 September 22, 2019
မကျြလုံးကမွငျတဲ့အရာကို ဦးနှောကျကမှနျကနျအောငျ ဆုံးဖွတျပေးရပါတယျ။ အဆိုပါသိပ်ပံသဘောတရားကို ပိုပွီးသခြောစဖေို့အတှကျ အထူးပွုလုပျထားတဲ့ ရုပျပုံတှနေဲ့ လူတှရေဲ့ဦးနှောကျကို စမျးသပျတဲ့အခါမှာ အမွငျကိုမှောကျမှားအောငျ လုပျလိုကျတာနဲ့ ဦးနှောကျရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြလညျး မှားယှငျးသှားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အောကျဖျောပွပါပုံတှကေ တကယျမရှိတဲ့ အရာတဈခုကို ရှိလာသယောငျ ထငျမှတျစပေါလိမျ့မယျ။ ၁။ ပုံမှနျအတိုငျးကွညျ့ရငျ လှုပျရှားနတေဲ့ ပုံရိပျလို့ သငျထငျနိုငျပမေယျ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုတညျးကို စိုကျကွညျ့ရငျတော့ ငွိမျနတေဲ့ပုံကို သငျမွငျရပါလိမျ့မယျ။ ပုံဟာတကယျလညျး လှုပျရှားမနပေါဘူး။ ၂။ သငျ့ကိုတညျ့တညျ့ ကွညျ့နတေဲ့လူက ဘေးစောငျးအနအေထားနဲ့ဆိုရငျ အခွားတဈယောကျလို့ မွငျပါလိမျ့မယျ။ ၃။ ဘယျဖကျကိုကွညျ့တဲ့အခါ ပိုကျလုံးဘယျနှလုံးကို သငျမွငျပါသလဲ ပွီးရငျတော့ ညာဖကျကိုကွညျ့လိုကျပါ။ ၄။ ဘယျနဲ့ညာနဲ့ကို တလှညျ့စီကွညျ့တဲ့အခါ အမဲစကျလေးတှေ ပျေါလိုကျပြောကျလိုကျနဲ့ သငျမွငျနိုငျပါတယျ။ တဈနရောတညျးကို သခြောစိုကျကွညျ့မယျဆိုရငျ အမဲစကျတှေ မရှိတာကို သငျမွငျရပါလိမျ့မယျ။ ၅။ ပုံထဲက […]